Budata WinLogOnView maka Windows
Free Budata maka Windows (0.05 MB)
Mmemme WinLogOnView bụ otu nime ngwa nwere ike inye nnukwu ọfụma ọkachasị ndị na -eche onye na -eji kọmpụta ha na mgbe, yana maka ndị kwesịrị inyocha ntinye na ntinye maka ebumnuche nchekwa. Isi ọrụ mmemme a bụ ịdebanye aha onye ọrụ na -abanye na na kọmputa gị yana mgbe ọ ga -egosi gị ya dị ka akụkọ.
Mmemme a, nke nwere njirimara enyi na enyi, nwekwara ike inyocha ntinye na ntinye nke ọ bụghị naanị kọmpụta mpaghara gị, kamakwa kọmpụta ndị ejikọtara gị na anya. Yabụ, ọ bụ netiti ihe ndị na -ahụ maka netwọkụ na ndị ọkachamara nchekwa sistemụ nwere ike ịnwale. Ebe ọ bụ na amaara na ndị ọrụ na -arụkarị izu ohi data na ụlọ ọrụ noge adịghị mma, ị nwere ike soro onye banyela na mgbe, ekele WinLogOnView.
Nime ozi nke mmemme ahụ gosipụtara na mkpesa, ozi NJ nke onye ọrụ batara na ọpụpụ, aha njirimara, ngalaba na aha kọmputa nke onye na-abanye ugbu a, yana ogologo oge kọmputa ji abanye. Echefukwala iji ya ma ọ bụrụ na i chere na kọmputa emebisịla ma metọọ ya noge na -adịghị anya. Ọ bụ ihe nwute, ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ na Windows XP.
Nha faịlụ: 0.05 MB
Mmepụta: Nir Sofer